पुम्दिकोटको विशाल शिव मूर्ति उत्कृष्ट गन्तव्य : प्रदेश प्रमुख पौडेल - Jagaran Post
जागरण पोस्ट ५ श्रावण २०७८, मंगलवार ११:०६
पोखरा : गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले पोखरा महानगरपालिका-२२ पुम्दिकोटमा निर्माणाधीन ५२ फिट अग्लो शिव मूर्तिले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने बताएका छन् । साउनको पहिलो सोमबार शिव मूर्तिको अवलोकन गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले पोखरा पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको र विशाल शिव मूर्तिले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने बताएका हुन् ।
उनले नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिकरूपमा धनी रहेकाले यसको विकास र संरक्षणमा ध्यान दिन सके अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कोरोनाका कारण धेरै मानिसले शान्त र आध्यात्मिक ठाउँहरुको खोजिरहेको जनाउँदै उनले कोरोना कम हुँदै गएपछि यस क्षेत्र धार्मिक एवं अन्य पर्यटकका लागि रोजाइमा पर्ने बताए ।
नेपालकै अग्लो दाबी गरिएको सो शिव मूर्ति रु. ४० करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । करिब ४० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको सो कार्यका लागि हालसम्म रु. २० करोड खर्च भइसकेको छ । हिलट्याङ्क प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक कमल जैनले सो शिवको मूर्ति प्रदान गर्नुभएको । भारतको मथुराबाट ल्याइएको सो मूर्ति बाहिर फाइबर र भित्र स्टिलबाट निर्माण गरिएको छ । पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनुका साथै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने विश्वास अध्यक्ष बरालको छ ।
सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालगायत विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेको बरालले जानकारी दिए । समितिले मूर्ति निर्माणका लागि विसं २०७३ मा महायज्ञ लगाएर रु. छ करोडभन्दा बढी नगद र जग्गा प्राप्त गरेको थियो । मूर्ति पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइए पनि अर्थाभाव र कोरोनाका कारण निर्माण केही ढिला हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास प्रविधिमैत्री बन्दै